Socdaalkeygii Woqooyiga - Taxanaha 89 - 90 - Qaybta Afraad - Caasimada Online
Home Warar Socdaalkeygii Woqooyiga – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta Afraad
Socdaalkeygii Woqooyiga – Taxanaha 89 – 90 – Qaybta Afraad
Socdaalkeyga magaalooyinka waa weyn ee woqooyiga Soomaaliya sannadihii 1989 iyo 1990 wuxuu ahaa socdaal nolosheyda ku yeeshay saameyn aad u weyn.
Dulmi badan oo Soomaali ay u geystay Soomaali kale ayaan arkay. Rag aan qaarkood Taxanahan uga warrami doono ayaan ku kala bartay – dhinac wanaagsan iyo dhinac gurracanba. Khibradda aan socdaalkaas ka helay ayaa aakhirkii qeybta ugu weyn ka qaadatay go’aanka aan ii fudueyn ee ahaa in aan dalkeyga ka haajiro.
Xamar markii aan joogay, ayaga oo ka xun, shacabku waxay ka hadli jireen warar dhiillo leh oo ka dhacay Burco iyo Hargeysa. Hadallo aan mid walba la yaabo oo kolleey run iyo qaar been ah isugu jiri karay ayaan maqli jiray. Laakiin wax kasta oo aan hore u maqlay iyo cid aan hore isu aragnay oo ma jirin marnaba ii diyaarin kartay waxa aan la kulmay markii aan tegey Berbera, Hargeysa, Burco iyo Borame.
Magaalo kasta waxaan soo bandhigi doonaa sawirka guud ee xaaladdii aan ku arkay markii aan tegey 89 iyo / ama 90. Waxaa kale oo aan wax ka taaban doonaa dhacdooyin iyo kulammo goos goos ah oo aan goob joog u ahaa, kuwaas oo marka la isku daro dhibic yar uun ka noqonaya xaqiiqada dhan ee meesha taallay inta aan joogay, ka hor iyo ka dibba.
Ujeeddadeydu ma ahan in aan qof ama qabiil farta ku fiiqo. Waxaan rabaa in aan xog la wadaago ummadda Soomaaliyeed si ay gacan uga geysato tilmaamidda baaritaanka wixii dhacay. Iyo si ay wax uun ugu biiriso fahamka taariikhda dhow ee Soomaaliya. Waxaa kale oo aan uga dan leeyahay in ay qayb ka noqoto waxbarasho horseedda in mustaqblka ay dadkeennu ka fogaadaan taas oo kale iyo xad gudub kasta oo aadane ka dhan ah.
Ugu dabeyn waxaan uga dan leeyahay in aan anigu isku daweeyo. Ugu yaraan in aan isku qanciyo in aan billaabay in aan guto waajibkeyga ah in si sax ah u soo gudbiyo fahahmkeyga waxa dhacay inta aan goobjoogga u ahaa.
Berbera waxay ahayd magaalo aanuu raad dagaal oo oogada ahi ka muuqan. Waana sax oo gudaheeda laguma dagaallamin berigaas. Dagaal ay indhuhu qabtaan kuma arkeysid.
Guryaha iyo waddooyinku waa ay dhisan yihiin. Dadweynuhu waa joogaa magaalada inkasta oo ay dad yar tahay. Laakiin waa magaalo si u dansan. Ma dareemeysid in aad joogto magaalo caadi ah. Intaa wax baad tabeysaa meel ay wax si ka yihiinna ma tilmaami kartid. Waa sida raashin aan cusbo lahayn.
Waa Magaalo mareysa heer niyad jab ah. Dadku indhaha uun kaa eegayo. Qof kuu xog warrameya ay aad u adag tahay in aad aragto. Farxad iyo furfurnaan la’aanta magaaladu waa mugdi kaa daahaya in aad magaalo dareento, kana mid ahaato.
Dhaqaaluhu waa liitaa. Dhaqdhaqaaq ganacsi oo macna leh ma arkeysid. Waa Dukaan, makhaayad iyo hotel yar oo aan marti badneyn. Mar ayaan arkay, ayaan u maleynayaa, xoolo aan badneyn oo la dhoofinayo. Sidoo kalena marmar ayaa dad tarxiil ah la keenaa.
Waxaa intaa dheereyd xan lid ku ah ciidammada siiba militeriga iyo nabadsugidda saraakiishooda qaar ka mid ah. Waxaa lagu eedeyn jiray xarig iyo bahdil noocyo kala duwan ah in ay u geystaan dadweynaha magaalada. Ragga qaar ayaa lagu eedeyn jiray in ay baadaan qofkii wax haytsa. Qaar kale waxaa lagu eedeyn jiray cagajugleyn qaarna dhaqan xumo kale.
Waxaa fadhiya militeri. Ugu yaraan afar goobood oo airporka iyo dekeddu ay ka mid yihiin ayay xaruumo ku leeyihiin.
Taliyuhu waa nin ciidanka Badda ka soo jeeda. Aad ayay dadku uga sheegtaan. Inta aadan arag ayaaba khalkhal lagugu abuurayaa.
Marar badan ayay shaqo toos ahi na dhex martay. Mararka qaar waxay ahayd shir ay dad badani fadhiyaan. Qaarna waxay ahaayeen labadeenna oo keliya. Weligeey kama maqal kelmad qallafsan. Kamana dareemin kuleyl iyo cadaawad ka muuqata oo uu u qabo dadka degaanka iyo dad kale toona. Wuxuu aniga iigu muuqdaa nin mas’uul ah, Allah-na caabbuda.
Waan xusuustaa habeen aan aniga iyo nin ajnebi ahi la kulannay. Aniga oo hor fadhiya aayan ka fekerayay war ninka sidaan u deggan ee sidaan u tasbiixsanaya iyo sidee isu qaban karaan xadgudubyada laga sheegayo? Allah ayaa wax kasta og.
Mar kasta wuxuu gacanta ku sitay tusbax yar oo aan u maleynayo in uu ahaa nooca tirsigiisu yahay 33. Dadku aad ayay uga baqi jireen ugana sheegan jireen. Howshayada samafalku gacan ay uga baahatay oo inta aan ugu tagnay uu maya na yiri ma xusuusto.
Nooca hadda Madaxda looga sheegto ma ahayn xaalka Berbera. Keliya qof aad is barateen kuguna kalsoon ayaa kuu sheegi karay cabashada Madaxda.
Saldhigga booliiska ayaa magaalada ku dhex yaalla. Marmar baan Magaalada ku arkaa booliiska dharka ciidanka lebbisan oo lugeynaya ama baabuurtooda ku jooga. Xiriir badani nama dhex marin Booliiska iyo Taliyihiisa midna.
Guryo gaa-gaaban oo aad mooddo goob ganacsi oo magaalada gudaheeda ah baddana aan ka fogeyn waxaa ah Taliska Nabad Sugidda.
Ciidanka Nabadsugiddu ma qaato lebbiska iyo baabuurta lagu yaqaan ciidanka.
Hubkiisu waa bastoolad. Xataa haddii ay kuu muuqatana shaarka ayaa ka sarreeya oo waxay ka dhigan tahay sida in ay qarsoon tahay.
Taliyaha NSS ee Berbera waa nin aammus badan anigana in badan shaqo nama dhex marin. NSS waa magacii berigaa loo yiqiin Nabadsugidda. Taliye ku xigeenka waxaad ka dareemeysaa awood ama waa dabeecad cadcad oo uu u dhashay. In badan ayaan isugu nimid shaqo.
Xafiis yar oo ka kooban qolal gaa-gaaban oo badda agteeda ah ayay deggan yihiin. Waxaa la ii sheegay in meel dadka lagu xiraa ay ku taal isla xaruntaas. Socdaalka ayaga ayaa ka mas’uul ah. U maleyn maayo marka laga reebo ICRC in ay waayadaa arki jireen ajnebi kale oo ka degeya ama ka dhoofaya Berbera.
Malahayga waa sababtaa midda ku kalliftay arrinkii ugu horreeyay ee aniga iyo ayaga na dhex mara. Waa muran maamul oo ka dhashay markii ay damceen in ay lacag ka qaadaan ajnebiga imaanaya magaalada sidii in ay dibadda ka yimaadeen.
Markii aan u tegey ee aan in wadahadalnay Taliye-ku-xgeenka, waxaan ka dareemay in uu ogaa in aanuu qiil haysan. Sidaa darteed anigu isukuma dayin in aan fahamsiiyo in Soomaaliya ay mid keliya tahay, Qofkan ajnebiga ahina uu ka soo degey Muqdisho. Isla visihii uu dalka ku soo galayna uu haysto. Waxa keliya oo isagu ku leeyahayna ay tahay hubin in ay waraaqahaas haystaan. Keliya waxaan tusay in aan taas fahamsan nahay wax ka sokeeya oo aan aqbali karnaana aanay jirin.
Wuu i soo siiyay baasabboorradii, halkaas ayuuna ka billowday xiriir toos ah oo aniga iyo isaga na dhex mara. Wuxuu ahaa nin ay dad badani ka sheegtaan. Wuxuu ahaa nin hadallo cadcad. Mararka qaarna wuxuu ahaa nin gar qaata. Waxaas oo dhan waa sida uu aniga iila dhaqmay. Ma ogi sida uu ula dhaqmi jiray shacabka magaalada.
Waxaan ka Taxanaha ku soo qaadi doonaa arrimo aad u culus oo uu Taliye Ku Xigeenka NSS-ta Berbera igala hadlay oo qaarkood ay ka mid yihiin taariikhda dhacdo muhiim ah oo Berbera xilligaas la soo gudboonaatay.
Taliyaha Nabadsugidda marnaba nama dhex marin howl sidaas ah oo toos ah. Waxaan arki jiray isaga oo magaalada dhex maraya. Wuxuu ahaa nin afgaaban. Aad looma ilaalin jirin. Dadkuna badiyaa kama caban jirin.
Taliyaha Booliisku wuxuu ahaa nin dhallinyar oo afgaaban. Isaga iyo Guddoomiyaha Degmada ma xusuusto wada shaqeyn na dhex martay.
Berbera waxay ahayd magaalo ay colaaddu dhan walba u saameysay. Laakiin qofka sii jooga magaalada una dhug yeesha ayaa dareemi karay in uu dagaal silloon ka socdo magaalada sida aad ku arki doonto Qaybaha kale ee Taxanahan.